Balan-qaadkii dhismaha buundaba Baardheere booto miyuu ahaa? -
HomeArimaha bulshadaBalan-qaadkii dhismaha buundaba Baardheere booto miyuu ahaa?
Balan-qaadkii dhismaha buundaba Baardheere booto miyuu ahaa?
November 20, 2019 F.G Arimaha bulshada, Wararka 0
Runta ragga way ka nixisaa, waxse ma yeesho. Biloowgii Oktobar waxaa la sheegay in ra’iisul wasaare Khayre uu bixiyay $317,000, kun oo doollar, lacagtaas oo dib loogu dhisayo buundada Baardheere. Waxaa baraha bulshada lagu faafiyay muuqaal laga soo duubay Khayre oo saxiixaya jeeg ay ku qorantahay lacagtaa aan kor ku xusan.
Hal maalin maskaxdayda kama aysan bixin inaan hubsado habka lacagtaas loo maamulay waaba haddii ay soo gasho gacanta guddigii loo xil-saaray qabashada hawsha buundada.
Mudo dheer oo aan kolba dhan xog ka raadinayay maanta ayaan xubno sare oo wasaaradda maaliyadda ka tirsan ka xaqiiqsaday, in jeegaha ay madaxdu qorto xaalkoodu durba iska bixi uusan ahayn. Waayo waa in laga soo saxiixo hant-dhawrka guud, wasaaradda maaliyadda & xubno kale oo ku shaqo leh, balse dhamaan dhinacyadaas kuma dhacaan inay iska saxiixaan lacag (jeegag) aan meelna kaga jirin miisaaniyadda dawladda, sidoo kalena aan la xaqiijin koontada xisaabtaasi ka go,ayso in baaqi uu ugu jiro masuulka jeega saxiixay. Taas oo macnaheedu yahay in guddiga loo dhiibay jeeg madhan oo bixintiisana ay shuruudo badan ku xidhantahay.
Hadal & dhammaan, lama yaabani in sidaas ay wax u dhacaan, sidoo kale lama yaabani in dan ku xidhan xafiis dawladeed ay bil & sanado ka qaadan karto, in balan-qaad masuul Soomaaliyeed uu fuli waayo iyadana ma aha wax aan baciidsanayo oo wax soo dhici jiray, balse waxaan la yaabanahay guddiga u xilsaaran qabashada hawshan ee ummaddu ku tuhunsantahay inay Xamar la fadhiisteen xoolo buundada loogu talo-galay, maxay ummadda xaqiiqda ugu sheegi la’yihiin?
Hadalku haba yaraadee, balan-qaadkii dhismaha buundaba Baardheere booto miyuu ahaa, guddigu bootada inay faafiyaan miyay balantu ahayd, maxay bulshada runta ugu sheegi la’yihin?